FIFA oo baaritaan ku wadda heshiiska uu Bruno Fernandes ugu soo biiray Manchester United kaddib dacwad ka timid Sampdoria – Gool FM
(Zürich) 06 Maaajo 2020. Waxa uu baaritaan ku socdaa heshiiskii uu Bruno Fernandes ugu biiray kooxda Manchester United sida ay xaqiijisay FIFA, kaddib markii kooxdiisii hore ee Sampdoria dacwad ka gudbisay iyadoo ku andacooneysa inay ka maqan tahay xuquuq ay ku lahayd iibkiisa.
Fernandes ayaa u soo dhaqaaqay Old Trafford bishii Jannaayo, waxaana kooxda Ingiriiska ah ay kula soo saxiixatay qiimo lacageed gaaraya 47 milyan oo gini oo u dhiganta (58 milyan oo dollar), balse Sampdoria oo saddex sano ka hor laacibkan ka iibisay kooxda Sporting C.P. ayaa ku doodeysa inaan la siin 4 milyan oo gini oo ay xaq u lahayd maadaama boqolkiiba toban (10%) ay ku lahayd iib walba oo ciyaaryahankan ku iibineysay kooxda Sporting.
25-jirkan ayaa hal xilli ciyaareed ku soo qaatay Sampdoria ka hor inta uusan Sporting CP ugu wareegin 7.5 milyan oo gini sanadkii 2017, waxaana heshiiskaas qayb ka ahaa in 10% kooxda reer Potugal ay siiso dhiggeeda marka ay sii iibineyso Bruno Fernandes.
“Waxaan xaqiijineynaa in 3-dii Abril 2020, kooxda Talyaaniga ah ee UC Sampdoria ay FIFA u gudbisay dacwad ka dhan ah kooxda reer Portugal ee Sporting Clube de Portugal, taasoo la xiriirta shardi dhaqaale oo ku jiray heshiiska kala wareegga ee ciyaaryahanka Portuguese-ka ah Bruno Miguel Borges Fernandes” ayuu yiri Af-hayeen u hadlay FIFA.
Waxaana uu intaas ku daray inay socdaan baaritaanno ku aaddan kiiskan, balse waxa uu ka cudur daartay inuu faah-faahin dheeri ah ka bixiyo.
Illaa iyo hadda ma jirto tilmaam muujineysa in Manchester United laga rabo wax lacag ah, maadaama sheekada ay quseyo kaliya kooxda Sporting CP.